Penile इम्प्लान्ट सर्जरीको बारेमा तपाईलाई जान्नु पर्ने कुराहरु - साम्प्रदायिक समाचार: अनलाइन व्यापार, थोक र B2B बजार समाचार
अप्रिल 8, 2021 अप्रिल 7, 2021 ज्याक केवेल ब्लग, विशेष समाचार, स्वास्थ्य
धेरै बिरामीहरूलाई केहि दिन वा हप्ताको लागि दुखाइ कम गर्ने आवश्यकता पर्छ।
करीव -०-80० प्रतिशत बिरामीहरूले सन्तुष्टि पश्चात शल्य चिकित्सा रिपोर्ट गरेका छन्।
Penile इम्प्लान्ट लुकाउनको लागि एक फैशन मा डिजाईन गरीएको छ।
आजका दिनहरू अपरिवर्तनीय इरेक्टाइल डिसफंक्शन (ED) अब लाज / दोषी भावनासँग सम्बन्धित छैन। एक कमजोर पुरुषत्वको भावना संग बाँच्न छैन। यद्यपि चिकित्सा विज्ञानमा प्रगतिले रचनात्मक उपचार मोड्युल ल्याएको छ जसले ED का लागि प्रभावकारी उपचार विकल्पहरू सुनिश्चित गर्दछ। Penile इम्प्लान्ट सर्जरी ईडी को लागी एक सफल र लाभदायक उपचार प्रक्रिया को रूप मा मानिन्छ।
यहाँ तपाईलाई पेनिल इम्प्लान्टको बारेमा जान्नु आवश्यक छ।
नियन्त्रित मधुमेहको साथ अपरिवर्तनीय इरेक्टाइल डिसफंक्शन भएको पुरुषहरू शल्यक्रियाको लागि राम्रो उम्मेदवार हुन्।
Penile इम्प्लान्ट के हो?
यो एक चिकित्सा उपकरण हो जुन पुरुषहरूमा इरेक्टाइल डिसफंक्शनको उपचारको लागि प्रयोग गरिन्छ। इम्प्लान्टले लगभग ED बिरामीलाई करीव प्राकृतिक निर्माण अनुभव गर्दछ। सबै सिफारिस विकल्पहरू असफल भएमा मात्र यो सिफारिस गरिन्छ।
Penile इम्प्लान्ट सर्जरी को लागी राम्रो उम्मेदवार
तलका मुद्दाहरूको साथ पुरुषहरू सिफारिस गरिन्छ Penile इम्प्लान्ट शल्यक्रिया:
- पुरुषहरूले पीडादायी इरेक्शनको अनुभव गरिरहेका छन्।
- अपरिवर्तनीय इरेक्टाइल डिसफंक्शनबाट ग्रस्त पुरुषहरू।
- कुनै पल्मोनरी वा मूत्र पथ संक्रमण बिना अपरिवर्तनीय इरेक्टाइल डिसफंक्शन।
- अपरिवर्तनीय इरेक्टाइल डिसफंक्शनको साथ नियन्त्रण मधुमेह.
ईरेक्टाइल डिसफंक्शनका सबै उपचार विधिहरू काम गर्न असफल भयो।
Penile रोपण का प्रकार
इन्फ्लेटेबल इम्प्लान्ट्स - बिरामीको आवश्यकता अनुसार फुलाउन र डिफ्लाइट गर्न सकिन्छ।
Semirigid Rods - कडा पेनाइल इम्प्लान्ट जुन आकारमा उही रहन्छ र अर्ध-कडा स्थिति कायम गर्दछ।
Penile रोपण किन?
यस प्रकारको शल्यक्रिया केवल अन्तिम स्रोतको रूपमा सिफारिस गरिन्छ। यो बिरामीको छनौट र विगतका चिकित्सा सर्तहरूमा पनि निर्भर गर्दछ। यो महत्वपूर्ण छ डाक्टरको सल्लाह लिनुहोस् सही निर्णय गर्न।
सर्जरी पछि पुन: प्राप्ति
डाक्टरले तपाईंलाई शल्यक्रिया पछि निर्देशनहरूको सेट उपलब्ध गराउँदछ। यसले शल्य साइटको देखभाल गर्ने तरिकाहरू र पम्पको प्रयोग समावेश गर्दछ। धेरै बिरामीहरूलाई केहि दिन वा हप्ताको लागि दुखाइ कम गर्ने आवश्यकता पर्छ। एन्टिबायोटिक्स सामान्यतया संक्रमणको कुनै पनि सम्भावना कम गर्न निर्धारित गरीन्छ।
धेरै बिरामीहरू शल्यक्रिया पछि केहि दिनमा काममा फर्कन सक्छन्। यद्यपि पूर्ण रूपमा ठीक हुन धेरै हप्ता लाग्न सक्छ। Anywhere--4 हप्तासम्म जहाँसुकै लाग्छ यौन गतिविधि पुनः सुरु गर्न सक्षम हुन।
के शल्य चिकित्सा प्रभावकारी छ?
सर्वेक्षणले inflatable penile इम्प्लान्ट शल्यक्रिया को लगभग 90-95 प्रतिशत सफलता दर रिपोर्ट गरेको छ। यो शल्यक्रिया संभोग को लागी पर्याप्त बिरामीहरु बीच eretions मा परिणाम हो। करीव -०-80० प्रतिशत बिरामीहरूले सन्तुष्टि पश्चात शल्य चिकित्सा रिपोर्ट गरेका छन्।
पेनाइल इम्प्लान्ट एक प्राकृतिक निर्माणको नकल गर्न बनाइन्छ जसले सर्जरी पछि बिरामीहरुलाई सन्तोषजनक अन्तरक्रिया गर्न अनुमति दिन्छ। यी लि hard्ग कडा हुँदैको टाउको योगदान छैन। इम्प्लान्टहरूले कुनै पनि हिसाबले orgasm वा सनसनीलाई असर गर्दैन।
पेनाइल इम्प्लान्ट एक प्राकृतिक निर्माणको नकल गर्न बनाइन्छ जसले सर्जरी पछि बिरामीहरुलाई सन्तोषजनक अन्तरक्रिया गर्न अनुमति दिन्छ।
कुनै पनि प्रकारको शल्यक्रियाको साथ, Penile रोपण पनि निम्न जोखिमहरूसँग सम्बन्धित छ:
- संक्रमण (मधुमेह र / वा मेरुदण्डमा चोट लागेको बिरामीहरू बीच साधारण)
- दाग ऊतकको गठन
- प्रत्यारोपण पम्प / जलाशयको विस्थापन
जोखिमहरूको दुर्लभ प्रकार
- मेकानिकल असफलताहरू
- प्रत्यारोपण हटाउन / मर्मत गर्नको लागि एरोसन / आसंजनले अर्को शल्यक्रियाको माग गर्दछ
यदि मामलामा, तपाईंलाई ईडीको लागि सटीक चिकित्सा कारणको लागि पत्ता लागेको छ भने, बीमाकर्ताले पूरै वा आंशिक रूपमा उपचार खर्च खर्च गर्नेछ। वास्तविक लागत सहित कारकको एक विस्तृत श्रृंखला मा निर्भर गर्दछ:
- प्रत्यारोपण को प्रकार
- बिरामीको निवास स्थान
- अन्य प्रदायकहरूको साथ नेटवर्क
- कोपीहरू र बिरामीको योजनाको कटौतीयोग्यहरू
यदि मामलामा, तपाईंसँग बीमा कभरेज छैन, डाक्टरले आत्म-भुक्तानी योजनाको लागि निर्णय लिन सक्दछ। तपाईले लागत अनुमानको लागि अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईको बीमाकर्ताको साथ सम्पर्कमा रहन तालिका शल्यक्रिया गर्नु अघि। प्रायः मेडिकल बीमा प्रदायकहरूले वित्तीय मामिलाहरूको लागि बिमा विज्ञको सहयोग लिन्छन्।
Penile इम्प्लान्ट लुकाउनको लागि एक फैशन मा डिजाईन गरीएको छ। यी सम्भोगको समयमा eretions को साथ मद्दत गर्दछ। डाक्टरहरूले सामान्यतया यसलाई एक व्यावहारिक विकल्पको रूपमा सिफारिस गर्छन् जब सबै अन्य उपचार परिणामहरू उत्पन्न गर्न असफल हुन्छन्।
सांप्रदायिक समाचार स्वास्थ्य प्रत्यारोपण सर्जरी
ज्याक केवेल लेखक, विज्ञान सम्पादक, प्रकृतिवादी, उद्यमी हुन्। ऊ पुस्तक लेख्न र चित्रणमा केन्द्रित छ। साथै, उहाँ यसमा नियमित योगदानकर्ता हुनुहुन्छ माउन्टेन्चब्लग